China Fako sy fako voajanahary saka | Bondhot
Ny tombony azo amin'ny fako saka Tofu noho ny karazana fako hafa dia
● Azo antoka- vokarina amin'ny vokatra voajanahary izay mahatonga azy tsy haninona raha fihinan'ny biby fiompy.
● Soft Touch-Vita avy amin'ny residue curd voajanahary sy ny masiran'ny katsaka miaraka amina endrika Ultra-malefaka izay mahazaka vodin-kazo misy tohotra mora tohina.
● Dust Free-Izy io dia miaro amin'ny lalan'ny taovam-pisefoana miaraka amin'ireo singa vovoka aotra.
● Super Absorbency and Deodorization- Manondraka haingana ny urine ny saka izy ary manalefaka ny fofona mahery amin'ny fifandraisana.
● Fanariana mora- Malalaka be sy mora simba ary mora ariana ao anaty trano fidiovana na zaridaina ho toy ny zezika ny clump.
● Scooping mora- Manamboatra clumps tsy matevina izay mora esorina.
● Sariaka amin'ny tontolo iainana- mamokatra fofona tsara izy io na eo aza ny fisotron'ny saka ary mamela tontolo iainana ara-tontolo iainana.
● Aza dia mandeha intsony, aza hadino ny trano
Ny fako saka ambaratonga tofu-sakafo dia namboarina avy amin'ny soja voajanahary ary noforonina tamin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia haingam-pandeha sy fanamainana haingana, sariaka amin'ny tontolo iainana, tsy misy additives simika, ary manakana ny sakana amin'ny gastrointestinal rehefa mitelina ny saka.
Ny kalitao manohitra ny fanarahan-dia dia manadio mora foana! Ny fako saka Tofu dia misy zana-borona avy amin'ny zavamaniry miaraka amina tsorakazo tsy mitongilana sy fanamafisana manokana izay manampy amin'ny famoronana clumps kely sy matevina amin'izay manamora ny fitadiavana. Ireo tompon'ny saka dia hahatsikaritra ihany koa fa tsy dia misy fanarahana maso ary ny saka dia hankafy endrika marefo marefo izay ahazoana aina kokoa ho an'ny tongony marefo.
Izy io dia iray amin'ireo litters saka be mpitia indrindra noho ireo singa tia tontolo iainana toy ny curd bean & canch mais. Atambatra amin'ny dity legioma sy ny deodorant avy eo miendrika fasika andry. Tsy toy ny tanimanga vita amin'ny tanimanga na Silica, ny fako saka Tofu dia mora simba 100% izay midika fa azo antoka ny mampiditra azy ao anaty trano fidiovana na ampiasaina ho zezika zaridaina.
Ianao sy ny saka dia miaina fofonaina poti-vovoka avy amin'ny feta tanimanga, ary inona no ratsy kokoa? Ny saka anao koa mihinana azy rehefa manadio ny tongony sy mizara oroka aminao! Tsy toy ny tanimanga vita amin'ny tanimanga na Silica, ny fako saka Tofu dia namboarina tamin'ny voa 100% natiora (ny vokatra avy amin'ny tofu). Tsy maimaim-poana amin'ny simika fotsiny izy io, fa miaraka amin'ny fifehezana fofona tsy resy koa. Mitroka ny fisotrony ary maina ny fako matevina ho an'ny fifehezana fofona 5x tsara kokoa noho ny fiompiana fako tanimanga.
Teo aloha: Fako saka
Manaraka: fako saka tofu